Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Ere na mgbazinye n'ime Canada
Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ n'ime Mississauga
Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ n'ime Ontario
1 - 3 nke 3 Ndepụta
Ebiputara site na r0ckyourworld
nlele Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Bipụtara 5 months ago
Ebiputara site na Chase Richardson
nlele Ndị na-ahụ maka imeziwanye ụlọ Bipụtara 11 months ago
Họrọ udiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Condos Townhouses Studios Villas Cottages Bungalows Log Homes HomesLand lots Agricultural LandCommercial Real Estate Hotels Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real Estate Ecological HousingBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Construction Companies Design ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers
Canada bụ mba dị na mpaghara North America. Ógbè iri ya na ókèala ya atọ sitere na Atlantic ruo Pacific na n'akụkụ ugwu ruo na Oké Osimiri Arctic, na-ekpuchi nde kilomita 9.98 (kilomita 3.85), na-eme ka ọ bụrụ mba nke abụọ kachasị na ụwa site na mkpokọta mpaghara. Ókè ya n’ebe ndịda na ọdịda anyanwụ ya na United States, na-eru kilomita 8,891 (5,525 mi), bụ ókèala mba ụwa kachasị ogologo n'ụwa. Isi obodo Canada bụ Ottawa, obodo atọ kasị ukwuu na ya bụ Toronto, Montreal na Vancouver. Ndị obodo dị iche iche biri ebe bụzi Canada ruo ọtụtụ puku afọ tupu European amalite ịchị. Malite na narị afọ nke 16, njem ndị Britain na French mere nyocha ma mesịa biri n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Atlantic. N'ihi ihe ọgụ dị iche iche dị na agha, France jikọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ógbè ya niile na North America na 1763. Na 1867, na njikọta nke obodo atọ nke British North America site na Confederation, e guzobere Canada dị ka gọọmentị etiti nke mpaghara anọ. Nke a malitere nnabata nke ógbè na ókèala yana usoro ịba ụba nnwere onwe si United Kingdom. Iwu nke Westminster nke 1931 gosipụtara nnwere onwe a na-ebuwanye ibu na 1931 ma gbakwunye ya na Iwu Canada nke 1982, bụ nke kwụsịrị ịbụ onye omebe iwu nke ndị omebe iwu Britain. Ndi Canada bu ndi ochichi ndi ochichi ndi ochichi na ndi ochichi nke ndi ochichi nke Westminster, ya na onye isi ochichi na onye isi ala nke buru onye isi oche na ndi isi ochichi. Mba a bụ obodo dịkarịsịrị n'etiti Commonwealth of Nations, onye otu Francophonie ma bụrụkwa onye na-asụ asụsụ abụọ na ọkwa gọọmentị. O di otu kachasi elu nha maka nha anya zuru oha nke ochichi, nnwere onwe ndi obodo, ndu ndu, nnwere onwe aku na uba na ulo akwukwo. Ọ bụ otu n'ime mba na agbụrụ agbụrụ dị iche iche n'ụwa dum, ngwaahịa nke mbata na ọpụpụ nke ukwuu si n'ọtụtụ mba ndị ọzọ. Mmekọrịta ogologo oge Canada na United States siri ike emetụtala akụ na ụba na ọdịbendị ya. Mba mepere emepe, Canada nwere ọnụọgụ iri na asaa nke mkpụrụ ego ole-ole maka ụwa niile yana ntanetị nke iri na atọ kachasị na ntuliaka mmepe mmadụ. Ọnọdụ akụ na ụba ya dị elu bụ nke iri kachasị na ụwa, na-adabere n'ụzọ dị ukwuu na akụnụba ya zuru oke na netwọ ahịa azụmaahịa etolitela nke ọma. Canada bụ akụkụ nke ọtụtụ nnukwu mba na gọọmentị etiti ma ọ bụ ìgwè dị ka United Nations, NATO, G7, Group of Ten, G20, United States – Mexico – Canada Agreement na Asia-Pacific Economic Cooperation forum.